तपाइँको तालिकालाई र colorको एक टच दिन4व्यंजनहरू बेजिया
मारिया vazquez | 20/07/2021 12:00 | पाक कला
गर्मी को समयमा हामी घर मा रंग संग सबै अधिक साहसी छन्। हामी रिसोर्ट चम्किलो रंगीन सामान खुशीका वातावरणहरू सिर्जना गर्न जुन हामी वर्षको यस समयमा महसुस गर्छौं। टेबुलमा पनि, जहाँ रंगीन व्यंजनहरू सेन्टर स्टेज लिन्छन्।
बेजियामा हामी आज चार टेबलवेयर साझेदारी गर्छौं जुन तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको टेबललाई र colorको छुनुहोस्। र होईन, तपाइँले यसलाई गर्नका लागि पूरै टेबलवेयर खरीद गर्नुपर्दैन, यो केहि टुक्राहरू समाहित गर्न पर्याप्त हुनेछ ताकि तपाइँको तालिका गर्मी मोड अपनाउँदछ।
हामी सचेत छौं कि पूर्ण टेबलवेयरले ठूलो लगानीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। थप रूपमा, सबै घरमा दुई पूर्ण व्यंजनहरू राख्न ठाउँ हुँदैन। त्यसकारण हामी तपाईंलाई प्रोत्साहन दिन्छौं व्यक्तिगत टुक्रा किन्नुहोस्, टुक्राहरू जुन तपाईलाई मनपर्दछ, त्यसले तपाइँको ध्यान आकर्षण गर्दछ र तपाइँ तपाइँको दैनिक टेबलवेयरसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ।
1 ग्लास टेबलवेयर जारा होम
2 भ्यालेन्स टेबलवेयर
3 Odalin टेबलवेयर
4 बाइटा टेबलवेयर र ज्यामेट्री चश्मा
ग्लास टेबलवेयर जारा होम
नयाँ जारा होम स from्ग्रहबाट पहेलो, हल्का हरियो र गुलाबी रंगहरूमा गिलास टेबलवेयर ध्यान नदिई जान्छ। र यदि तिनीहरूको छुट्टै टुक्रा आँखा चिम्ल्याउने हो भने, तपाईंले तिनीहरूलाई एकसाथ नदेखेसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्! जब विभिन्न र colors्गका टुक्राहरू मेजमा मिलाइन्छन्, तिनीहरूको सूचीमा जस्तै, तालिका रूपान्तरण हुन्छ।
यो एक विकल्प हो जुन हामीसँग मायामा परेको छ तर त्योसँग एक ठूलो तर: डिशहरू छन् माइक्रोवेभ वा डिशवॉशरका लागि उपयुक्त छैन। यस कारणका लागि, हामी यो विचार गर्दैनौं कि यो दिनदिनको लागि आरामदायक टेबलवेयर हो, तर यसको मिठाई प्लेटहरू वा चश्माहरू खाना समाप्त गर्न वा खाजाको आनन्द लिन उत्तम विकल्प हुन सक्छन्।
यदि तपाईंलाई जारा होम टेबलवेयरको रंगहरू मनपर्‍यो भने, तपाईं ब्यालेन्स टेबलवेयरको गहन रेड, साग र पर्खाको प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। Maisons du Monde मा बिक्रीको लागि यो ढुware्गावेयर र माटाका टेबुलवेयर, विगतको भन्दा फरक हो माइक्रोवेभ र डिशवॉशर अनुकूल।
टेबलवेयरले डिनर प्लेटहरू, सूप प्लेटहरू, डेजर्ट प्लेटहरू, कपहरू, कचौराहरू र स्नैक ट्रे समावेश गर्दछ। अधिकांश भागहरू धेरै दुईमा बेचिन्छ, त्यसो भए तपाईलाई ठूलो लगानी बिना तपाईको मनपर्दोको संरचना सिर्जना गर्न कुनै समस्या हुने छैन।
Kave Home द्वारा Odalin हामी आज तपाईलाई देखाउने कति टेबलवेयरको सबैभन्दा वास्तविक हो। पोर्सिलीनबाट बनेको, यस टेबलवेयर बनाउने प्रत्येक टुक्राहरूमा सेतो दुई रंगको डिजाइन छ पहेंलो वा निलो विरोधाभासी किनाराहरू। हो, तपाईं यसलाई अधिक विवेकी निलो टोनमा पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
पोर्सिलेनबाट बनाइएको, एक प्राकृतिक खनिज, प्रत्येक टुक्राको आफ्नै रंग र बनावट हुन्छ। सबै छन् डिशवाशर सुरक्षित, माइक्रोवेभ र ओभन र तपाईं यी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको टेबल दुवै घर र घर भित्र, तपाईंको छत वा बगैचामा।
Odalin एक संग्रह हो जुन सबै प्रकारको खाद्य पदार्थहरूको लागि तयार छ। समतल प्लेटहरू, डेजर्ट प्लेटहरू, विभिन्न आकारका कचौरा र एक कफि सेटसमेत बनेको छ, जसको टुक्राहरू तपाईं छुट्टाछुट्टै किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईं शैलीको साथ आफ्नो टेबल भर्न सक्नुहुनेछ एपेटाइजरबाट डेजर्ट सम्म।
बाइटा टेबलवेयर र ज्यामेट्री चश्मा
१ Villa-टुक्रा बाइटा टेबलवेयर विला डी ईस्ट होम टिवोलीबाट यसको अर्को सुन्दर र ताजा र to्गका लागि हाम्रो मनपर्ने धन्यवाद अर्को हो। स्टोनवेयरबाट बनेको र हातले चित्रित गरिएको यसमा क्रमशः different बिभिन्न रंगहरूमा dinner डिनर प्लेटहरू, sou सूप प्लेटहरू र des मिठाई प्लेटहरू समावेश छन्। आकार र रंगमा विचलनहरूले यसको प्रत्येक टुक्राहरूको आकर्षणलाई जोड दिन्छ, के तपाईं सहमत हुनुहुन्न?
यद्यपि हामी यसलाई धेरै मन पराउछौं, भाँडामा दुई बाटहरू हुन्छन्। पहिलो यो हो कि तपाई तिनीहरूको टुक्राहरू अलगै किन्न सक्नुहुन्न; डिश वेस्टविंगमा पूरा बेचिन्छ। दोस्रो त्यो हो डिशवाशर सुरक्षित छैन, जुन दैनिक प्रयोगको लागि व्यावहारिक नहुन सक्छ।
क्षतिपूर्ति गर्नको लागि, यद्यपि वेस्टवि inमा पनि तपाईले फेला पार्न सक्नुहुन्छ चश्मा र goblets छविहरूमा यो टेबलवेयरको साथ। दुबै चश्मा र चश्माहरू बिभिन्न रंग र डिजाइनहरूमा बनावट बान्कीका साथ तपाईको टेबुलमा र adding्ग थप्नको लागि उपयुक्त छन् र डिशवाशर सुरक्षित छन्!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » पाक कला » Table टेबलवेयर तपाईंको टेबललाई र colorको एक टच दिन